Ahoana no mihazakazaka fitsapana A / B amin'ny pejy fitodiana | Martech Zone
Talata, Desambra 16, 2014 Talata, Desambra 16, 2014 Douglas Karr
Lander dia sehatra fampitana pejy mora vidy miaraka amin'ny fanandramana A / B matanjaka ho an'ny mpampiasa hampiakarana ny tahan'ny fiovam-ponao. Ny fitsapana A / B dia mitohy ho fomba iray voaporofo izay ampiasain'ny mpivarotra hamindra ny fiovam-po fanampiny avy amin'ny fifamoivoizana efa misy - fomba iray lehibe ahazoana orinasa bebe kokoa nefa tsy mandany vola bebe kokoa!
Inona no atao hoe fitsapana A / B na fitsapana misaraka
Ny fitsapana A / B na ny fizahana fizahana dia raha ny fahitana azy, dia fanandramana iray izay hizahaanao kinova roa samy hafa amin'ny Landing Page iray miaraka. Amin'ny ankapobeny dia tsy inona izany fa ny fampiharana fomba siantifika amin'ny ezaky ny varotra an-tserasera.
Fanalahidy iray hahazoana antoka fa manana ny angon-drakitra ilaina ianao hanohanana ny valiny dia ny fandrefesana ny isan'ny mpitsidika sy ny fiovam-po, ary ny fikajiana raha misy antoka ara-statistika amin'ilay fitsapana na tsia. KISS Metrics dia manome primer tsara amin'ny Ahoana ny fiasan'ny fitsapana A / B ary koa fitaovana ho an'ny manisa ny dikany ny valiny.
Ao amin'ny sary fanadihadiana A / B misy ifandraisany, i Landers dia mizaha ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fanandramana mahomby ny pejin'izy ireo ary manome tatitra momba ny valiny:
Andramo hatrany ny singa iray isaky ny fitsapana toy ny fisian-dahatsoratra, lohateny, lohateny, lohateny fiantsoana, loko, fijoroana vavolombelona, ​​sary, horonan-tsary, halavany, firafitra ary karazana atiny hafa mihitsy aza.
Safidio izay hizaha toetra sy hamolavola kinova samihafa arakaraka ny fitondrantenan'ny mpampiasa anao, ny fomba fanao tsara indrindra ary ny fikarohana hafa. Tadidio fa singa iray isaky ny fitsapana ihany no tokony haparitaka sy hosedraina.
Ataovy maharitra ny fitsapana mba hahazoanao antoka ara-statistikan'ny valiny, nefa aza hadino ny mamarana ny fitsapana ary apetaho amin'ny fomba haingana indrindra ilay kinova fandresenao mba hampitomboana ny fiovam-po.
Amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny Lander dia azonao atao ny mamorona sy manandrana kinova telo isan-karazany isaky ny pejy fitobiana miaraka. Midika izany fa afaka mamorona kinova samihafa amin'ny pejin-tranonao ianao amin'ny URL iray ihany.
Tags: ab fitsapanaLanderfitsapana pejy fitobianafitsapana ny pejyfitsapana misaraka
Ny fototry ny paikady fivarotana ara-tsosialy mahomby
Mar 6, 2015 ao amin'ny 2: PM PM
Salama Douglas! Misaotra anao nanazava ny fomba fampandehanana ny AB Test of a Landing Page mampiasa Lander. Fanazavana lehibe sy torohevitra mahasoa! Manasa ny mpamaky anao izahay hanandrana ny fitsapana maimaim-poana mandritra ny 30 andro ary hanatsara ny Pejin'ny fipetrahany. Miarahaba!